အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက အကြံပေးထားတဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးနည်း… - Thadin
[ May 19, 2019 ] ယာဉ်မရပ်ရ ဆိုင်းဘုတ်ချထားသည့် အိမ်ပိုင်ရှင်များ အခွန်ဆောင်ရတော့မည်…! NEWS
[ May 19, 2019 ] အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့ သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး … RELATIONSHIP
[ May 19, 2019 ] ခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးများ ၀ယ်ယူရန်ခက်ခဲသူတို့ အတွက် ညှင်းပျောက်ကြောင်းဆေးနည်းကောင်းလေး…! HEALTHY
[ May 19, 2019 ] အလှူရှင်များ သတိထားဖို့ ကော်သပိတ် အန္တရာယ်အကြောင်း…! LIFESTYLE
[ May 19, 2019 ] ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တောထဲမှ ထူးဆန်းတဲ့ မြည်​တမ်းသံကြီး…! NEWS
HomeRELATIONSHIPအမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက အကြံပေးထားတဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးနည်း…
July 10, 2018 Admin Kwee RELATIONSHIP 2
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ သူဟာ အမေရိကန်သမ္မတ သမိုင်းတစ်လျှောက် မှာ လူချစ်လူခင်အများဆုံးနဲ့ အကြင်နာတရား နှလုံးသားပြည့်ဝဆုံး သူရယ်လို့ အများက သတ်မှတ် ချစ်ခင်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်.. သူဟာ တကယ့်ကို မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ရယ်လို့လည်း ဆိုရမှာပါပဲ။ လူ အချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ စိတ်ထားသူ့ဆီမှာ မရှိသလို အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ လေးစားမှုရှိပြီး ညှာတာစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့စိတ်၊ ဖေးမကူညီ တတ်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ စိတ်ရင်းမှန်ကြောင့် သူ့ကို စံပြအမျိုးသားတစ်ဦးလို့ အမျိုးသမီးတွေက ချီးကျူးလေးစားခေါ်ဝေါ်ကြ တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘားရက်အိုဘားမားဟာ အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး ဇနီးသည်မီရှဲလ် နဲ့ သမီးနှစ်ဦးကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း၊ ဖခင်ကောင်း တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိုဘားမားဟာ သူ့အတွက် အချစ်ရေးနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဘယ်လိုနားလည် လက်ခံထားလဲဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ခံယူချက်သဘောထားတွေဟာ သိပ်ကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပါတယ်။ ဇနီး သည်၊ ဘဝလက်တွဲဖော်ဖြစ်လာမယ့် သူ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်အမျိုးသမီးကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်း သူ့ရဲ့ ခံယူချက်သဘောထားက လူတိုင်းက အတုယူလိုက်နာသင့်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသူ အမျိုးသားတစ်ဦးအနေနဲ့ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ အရေးကြီးတဲ့ အချက် ၃ ချက်ကို အိုဘားမားက သူ့ခံယူချက်နဲ့ အကြံပေးထားပါတယ်။
မိမိအိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်မယ့် သူဆီမှာ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်း အရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကို စိတ်ပါဝင်စားစေနိုင်လားဆိုတဲ့ အကြောင်းကို စဉ်းစားပါတဲ့… ဒီအချက်က သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်က ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်ကို စိတ်ဝင်စားမှုက အမြဲလိုလိုကိုဖြစ်နေရမယ်။ ရိုး သွားရတာမျိုး မဟုတ်ပဲ သူကအမြဲတမ်း ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစေတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်စေရမယ်ကို ဆိုလိုပါတယ်။
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက ကိုယ့်ကို ရယ်မောစေတဲ့သူလား။ လောကဒဏ်တွေကြောင့် ငိုခြင်း၊ ရယ်ခြင်းတွေ ရှိနေပေမယ့် ကိုယ့်ကိုတော့ အမြဲပြုံးလာအောင် အားပေးတတ်သူ၊ နှစ်သိမ့်ပေးတတ်တဲ့ အမျိုးသမီး ဖြစ်မလားဆိုတာကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်အနာဂတ် ကလေးတွေအတွက် မိခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်နိုင်မလား။ သင့်မျိုးဆက် အနာဂတ် ရင်သွေးတွေအတွက် သူမဟာ မိခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအမျိုးသမီးကို သင်ရွေး ချယ်သင့်ပါပြီ…” အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားက လက်တွဲဖော်ရွေးတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ဆုံး ဖြတ်ချက်တွေကို အကြံပြုပေးထားပါတယ်။
အမရေိကနျသမ်မတ အိုဘားမားလို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ သူဟာ အမရေိကနျသမ်မတ သမိုငျးတဈလြှောကျ မှာ လူခဈြလူခငျအမြားဆုံးနဲ့ အကွငျနာတရား နှလုံးသားပွညျ့ဝဆုံး သူရယျလို့ အမြားက သတျမှတျ ခဈြခငျကွပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ.. သူဟာ တကယျ့ကို မတ်ေတာတရားကွီးမားတဲ့ ခေါငျးဆောငျကောငျး တဈယောကျရယျလို့လညျး ဆိုရမှာပါပဲ။ လူ အခငျြးခငျြးခှဲခွားဆကျဆံတဲ့ စိတျထားသူ့ဆီမှာ မရှိသလို အထူးသဖွငျ့ အမြိုးသမီးတှအေပျေါမှာ လေးစားမှုရှိပွီး ညှာတာစောငျ့ရှောကျတတျတဲ့စိတျ၊ ဖေးမကူညီ တတျတဲ့ အမြိုးသားတဈဦးရဲ့ စိတျရငျးမှနျကွောငျ့ သူ့ကို စံပွအမြိုးသားတဈဦးလို့ အမြိုးသမီးတှကေ ခြီးကြူးလေးစားချေါဝျေါကွ တာဖွဈပါတယျ။
ဘားရကျအိုဘားမားဟာ အောငျမွငျတဲ့ အိမျထောငျရေးတဈခုကိုပိုငျဆိုငျထားသူဖွဈပွီး ဇနီးသညျမီရှဲလျ နဲ့ သမီးနှဈဦးကို အကောငျးဆုံး ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးတဲ့ အိမျထောငျဖကျကောငျး၊ ဖခငျကောငျး တဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ အိုဘားမားဟာ သူ့အတှကျ အခဈြရေးနဲ့ အိမျထောငျရေး ဘယျလိုနားလညျ လကျခံထားလဲဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ခံယူခကျြသဘောထားတှဟော သိပျကိုကွီးကယျြမွငျ့မွတျပါတယျ။ ဇနီး သညျ၊ ဘဝလကျတှဲဖျောဖွဈလာမယျ့ သူ့ရဲ့ အိမျထောငျဖကျအမြိုးသမီးကို ရှေးခယျြတဲ့နရောမှာလညျး သူ့ရဲ့ ခံယူခကျြသဘောထားက လူတိုငျးက အတုယူလိုကျနာသငျ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
အိမျထောငျပွုတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျခကျြခထြားသူ အမြိုးသားတဈဦးအနနေဲ့ မိမိအိမျထောငျဖကျကို ရှေးခယျြတဲ့အခါ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြ ၃ ခကျြကို အိုဘားမားက သူ့ခံယူခကျြနဲ့ အကွံပေးထားပါတယျ။
မိမိအိမျထောငျဖကျအဖွဈ ရှေးခယျြမယျ့ သူဆီမှာ ကိုယျ့အတှကျ စိတျဝငျစားစရာအကွောငျး အရာ၊ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့ကို စိတျပါဝငျစားစနေိုငျလားဆိုတဲ့ အကွောငျးကို စဉျးစားပါတဲ့… ဒီအခကျြက သိပျကို အရေးကွီးပါတယျ။ ကိုယျက ဒီအမြိုးသမီးအပျေါကို စိတျဝငျစားမှုက အမွဲလိုလိုကိုဖွဈနရေမယျ။ ရိုး သှားရတာမြိုး မဟုတျပဲ သူကအမွဲတမျး ကိုယျ့ကို စိတျဝငျစားစတေဲ့ အမြိုးသမီးဖွဈစရေမယျကို ဆိုလိုပါတယျ။
အဲ့ဒီအမြိုးသမီးက ကိုယျ့ကို ရယျမောစတေဲ့သူလား။ လောကဒဏျတှကွေောငျ့ ငိုခွငျး၊ ရယျခွငျးတှေ ရှိနပေမေယျ့ ကိုယျ့ကိုတော့ အမွဲပွုံးလာအောငျ အားပေးတတျသူ၊ နှဈသိမျ့ပေးတတျတဲ့ အမြိုးသမီး ဖွဈမလားဆိုတာကို ရှေးခယျြပါ။
သငျ့အနာဂတျ ကလေးတှအေတှကျ မိခငျကောငျးတဈဦးဖွဈနိုငျမလား။ သငျ့မြိုးဆကျ အနာဂတျ ရငျသှေးတှအေတှကျ သူမဟာ မိခငျကောငျးတဈဦးဖွဈလိမျ့မယျဆိုရငျတော့ ဒီအမြိုးသမီးကို သငျရှေး ခယျြသငျ့ပါပွီ…” အမရေိကနျ သမ်မတ အိုဘားမားက လကျတှဲဖျောရှေးတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ခံယူခကျြနဲ့ ဆုံး ဖွတျခကျြတှကေို အကွံပွုပေးထားပါတယျ။
JB နဲ့ Hailey တို့ရဲ့ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Selena ရဲ့ ခံစားချက်
Propecia Nioxin Como Usar Viagra Buying Antibiotics On The Internet cialis no prescription buy accutane online cheap Venta Libre De Kamagra
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက အကြံပေးထားတဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ရွေးနည်း… - Focus Myanmar
Users Yesterday : 1764
This Month : 36907
This Year : 232305
Total Users : 591329
Total views : 2712502